[अनुभूति] एक धूमिल स्मृति - साहित्य - नेपाल
[अनुभूति] एक धूमिल स्मृति
के अमेरिकाको व्यस्त समाजका मानिसलाई घन्टौँ एकै ठाउँ उभिएर कुनै चटक हेरिरहने फुर्सद हुन्छ होला ?
- जयदेव गौतम
जिन्दगीमा धेरै कुरा सोचेजसरी हुँदैनन् । नसोचेकै धेरै हुन्छन् । सोचेझैँ हुने भए त जीवन केवल एक सरल रेखा हुने थियो, जसमा कुनै उत्साह, उमंग र आश्चर्य केही हुने थिएन । आकस्मिकतालाई कुनै ठाउँ हुने थिएन । तर, त्यस्तो छैन, र त जीवन एक वक्ररेखा बनेर हाम्रासामु पसारिएको छ । अनि, बितेका पलहरू क्रमश: धूमिल स्मृतिमा परिणत हुँदै जान्छन् ।
केही वर्ष पहिलेको यस्तै स्मृति हो, यो ।
‘वान्ट अ बाइट ? जस्ट वान डलर !’ अनचिनारु प्रदेशमा कुनै अपरिचित मानिस मेरासामु ठिंग उभिएर मलाई आफूतिर आकर्षित गर्न खोजिरहेको थियो ।
नियालेर मैले उसलाई हेरिरहेँ । ऊ एक जना अश्वेत थियो । उसले घाँटीमा यम्मानको सर्प बेरेको थियो । त्यो सर्पै थियो वा अजिंगर, मैले ठम्याउन सकिनँ । तापनि, मलाई बुझ्न भने गाह्रो भएन, उसले एकपटक सर्पलाई ठुँगाउन लगाउँदो होला र त्यसबापत एक डलर रकम लिन्थ्यो होला । अर्थात्, एक डलरमा एकपटक सर्पदंश ।
तर, म भावशून्यजस्तो भएर एकटक उसलाई हेर्दै उभिइरहेँ । धेरैबेर उसले अनुनयका आँखाले मतिर हेरिरह्यो । म नजिकै अरू केही मानिस पनि थिए । त्यो अपरिचित ती मानिसतिर गएन । मलाई ती मानिसले पनि त्यस अपरिचित व्यक्तिप्रति खासै चासो राखेको वा देखाएको जस्तो लागेन । मलाई नयाँ देखेर अथवा एसियाली रङको बुझेर उसले मलाई टार्गेट गरेको थियो कि ? मलाई त्यस्तो कुनै कारण हो र होइन भन्नेतिर समय खर्चनु व्यर्थ लाग्यो । अन्तत: मैले खासै चासो नदेखाएपछि निस्पृह भावले ऊ त्यहाँबाट अन्यत्र लाग्यो ।
लगत्तै त्यहाँ अर्को एक अश्वेत मानिस आइपुग्यो । ऊ भर्खर म उभिएको ठाउँको पारितर्फ रहेको सेभेन इलेभन साइनबोर्ड लेखिएको पसलबाट निस्केको थियो । ऊ अग्लो थियो र पछाडि फर्काएर क्याप लगाएको थियो । उसको देब्रे हातमा सस्तो तर कडा किसिमको क्यान बियर थियो (मैले पछि थाहा पाएको, लामो क्यानमा हुने त्यो स्ट्रङ बियर अक्सर बेरोजगार अश्वेतहरूले नै धेरै खाँदा रहेछन्) । एकाध गोरा मानिस हाम्रो छेउमा उभिएका थिए । त्यो अग्लो अश्वेत मानिस बेन्चमा बस्यो । तर, अचानक जब ती गोरा मानिस त्यहाँबाट हिँडे र पारि सेभेन इलेभन पसलभित्र हराए, त्यो अश्वेत त रिसाउन पो थाल्यो । मलाई लाग्यो, सायद उसको बुझाइमा ऊ अश्वेत मानिस आएर बसेको हुनाले त्यो मन नपराएर ती गोरा मानिसहरू त्यहाँबाट हिँडेका होलान् !
अनि त उसले ती गोराहरू गएतिर हेर्दै गाली गर्न थाल्यो, ‘यू मदर फ... । कहिले हामीलाई दास बनायौ, कहिले हामीलाई निगर भन्यौ । अझै हामीलाई हेप्न छाड्दैनौ ? गोरा हौँ भनेर अझै तिमीहरूको यो दम्भ !....’
ऊ यसरी नै धेरै बेर कराइरहेको थियो । हाम्रो अगाडिबाट एउटा पुलिस कार गयो । त्यो अश्वेत मानिस त्यही कार गएतिर फर्केर कराउन थाल्यो । ऊ ‘पुलिस भए पनि म डराउँदिनँ । बढी भए मलाई समातेर जेल त हाल्छौ नि † अरू के हुन्छ र ?’ भन्दै फेरि उसै गरी गाली गर्ने र कराउने गरिरहेको थियो । निकै बेरपछि मात्र ऊ पनि एकातिर लागेको थियो । सायद त्यही क्यान बियर खान एक्लो ठाउँको खोजीमा ।
त्यसो त अमेरिकाको त्यो दिन निकै सहज थियो । घमाइलो र मनै हरर्र पार्ने अपराह्न । गर्मी थिएन । मौसममा चिसोपना थियो तर जाडै भने थिएन । म अमेरिकी राज्य भर्जिनियाको अलेक्जान्ड्रिया काउन्टीको माउन्ट भर्नान भन्ने ठाउँमा थिएँ । पहिलो अनलाइन नेपाली पत्रिका नेपालीपोस्ट डटकमका सम्पादक भाइ गिरीश पोखरेल मलाई पिकअप गर्न आउन लागेका थिए । म उनैलाई कुर्दै बस बिसौनीमा उभिइरहेको थिएँ । त्यति नै बेला त्यो सर्पदंश गराउन आग्रह गर्ने व्यक्ति मेरासामु आइपुगेको थियो । अलि टाढा पुगेपछि ऊ एउटा पसलभित्र छिर्‍यो र मेरा आँखाअगाडिबाट अलप भयो ।
मेराअगाडि सफा र चिल्ला बाटामा एकनाससित गाडीहरू आवतजावत गरिरहेका थिए । थरीथरीका वाहन बस, ट्रक, सानाठूला जिप, भ्यान, कार, एकाध लिमोजिन र यस्तै–यस्तै । मोटरसाइकल कतै देखिँदैन, बरू फाट्टफुट्ट साइकल भने देखिन्थे । जता आँखा पुग्छ, केवल चारपांग्रेहरूकै जमघटबाहेक केही देखिँदैन । पैदल हिँड्ने पनि निकै कम मात्र । मलाई लागेथ्यो, सायद बसोवास र काम गर्ने ठाउँ टाढा हुने हुँदा मानिस निजी कार अथवा सार्वजनिक बसमै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहँदा हुन् ।
माउन्ट भर्नान अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनको जन्मथलो हो (उनको कर्मथलो त सिंगो अमेरिका नै भइहाल्यो) । अमेरिकी राजधानीको नाम उनकै सम्मानमा राखिएको हो । उनी जीवित छँदै आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशनमा उनले वासिङ्टन डिसीको निर्माण गर्न लगाएका थिए । फ्रान्सेली आर्किटेक्चरबाट प्रभावित डिसीको निर्माण भइरहँदा उनी घोडा चढेर यही माउन्ट भर्नानबाट नियमित रूपमा निर्माण कार्यको रेखदेखमा गइरहन्थे । बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेर पछि त्यस साम्राज्यको विरोध गर्ने क्रममा तत्कालीन अमेरिकी नेतृत्व फ्रान्ससित नजिकिएको थियो । त्यसकारण अमेरिकी राजधानीमा विभिन्न भवनहरू निर्माण हुँदा फ्रान्सेली आर्किटेक्ट बोलाइएका थिए । अहिलेको विश्वविख्यात स्वतन्त्रताकी देवीको मूर्ति (स्ट्याचु अफ लिबर्टी) पनि फ्रान्सेलीहरूले नै अमेरिकालाई उपहारस्वरूप प्रदान गरेका थिए ।
माउन्ट भर्नानमा जर्ज वासिङ्टनको ठूलो मौजा रहेछ । त्यहाँ घुम्दा थाहा हुन्छ– उनको शेषपछि सरकारले उनको घर र जग्गालाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक संरक्षण गरेको छ र त्यसलाई सुरक्षित संग्रहालय बनाएर राखेको छ । जर्ज वासिङ्टन मेमोरियल म्युजियम अमेरिकी इतिहासको सुन्दर र महान् धरोहर रहेछ । त्यहाँ मजस्ता आक्कल–झुक्कल पुग्ने ‘ एमटी पकेटवाला’ भन्दा बर्सेनि हजारौँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँदा रहेछन् । त्यो एकातिर इतिहासको गरिमाको संरक्षण रहेछ त अर्कोतिर इतिहासको विरासतका रूपमा रहेका मूल्यहरू पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गौरवशाली माध्यम पनि ।
त्यहाँसम्म मलाई यस्तो अनुभूति निरन्तर भइरह्यो– अमेरिकीहरूले इतिहासको जगमा उभिएरै अहिलेको अमेरिका निर्माण गरेका हुन् । नयाँ निर्माण गर्दा उनीहरूले इतिहासलाई हेला गरेका छैनन्, कुनै उपेक्षा गरेका छैनन्, बरू इतिहासको सम्झना र संरक्षण गरेका छन् । आफ्नो इतिहासलाई बिर्सने मुलुकले कहिल्यै राम्रो विकास गर्न सक्दैन भनेको सायद यही होला ।
अलेक्जान्ड्रिया घुम्दा त्यहाँ कतै पनि अव्यवस्थित बस्ती वा पसल वा पार्किङ वा भीडभाड केही पनि देखिएन । घरहरू या त ठूला अपार्टमेन्ट छन्, होइन भने जोडिएर बनाइएका आवासीय भवन, जुन दुई र तीन तलाभन्दा अग्ला छैनन् अथवा सडकभन्दा निश्चित दूरीमा बनाइएका सिंगल प्राइभेट होम मात्र । सडक र फुटपाथे पेटीबाहेक अन्यत्र सबैतिर दूबो लगाइएको छ र त्यसले गर्दा धूलो उड्ने सम्भावनै रहेन ।
तर, म घरिघरि त्यही घाँटीमा सर्प बेरेको मान्छे सम्झिरहन्छु । मलाई लाग्न थाल्छ, चटकेहरू जहाँ पनि हुँदा रहेछन् । नौटंकीबाजहरू जता पनि भेटिँदा रहेछन् । सयौँ असमानता र हजारौँ असहजताहरू सर्वत्र छताछुल्ल रहेका भए पनि ग्लोबलाइज्ड भइसकेको आजको दुनियाँमा चटकेहरूको रंगीबिरंगी एकरूपता रोचक हुँदो रहेछ ।
मैले भारतका अनेक स्थान घुम्दा ‘जम्हुरे ?’ र ‘जी उस्ताद !’ भन्ने सवाल–जवाफजस्ता लाग्ने शब्दहरू अनगिन्ती पटक सुनेको छु । कतिपटक त तमासेहरूको हुलमा मिसिएर आफैँले पनि उनीहरूको चर्तिकला हेरेको छु । कहिले बाँदर नचाउने चटक, कहिले भालु नचाउने त कहिले सपेराले बिन बजाउँदै सर्पको खेला देखाउने, कहिले साना–साना केटाकेटी हातमा लामो लठ्ठी समातेर मसिनो डोरीमा हिँड्ने त कहिले जगरका रौँ ठड्याउने गरी पेटमा छुरी हान्नेसमेतका रक्तपातपूर्ण चटक † अझ कतिपय चटकेले त केटाकेटी र किशोरहरूलाई थप डराउन र चटक चलिरहेको समयावधिभरि बसिरहन बाध्य पार्न पहिले नै भन्ने गर्थे, ‘जो केटाहरू हल्ला गर्छन् अथवा बीचैमा हिँड्छन्, उनीहरूको तुरी गायब हुन्छ । नपत्याए एकछिन पछि छामेर हेर्नु ।’
त्यहाँ उभिएर चटक हेरिरहेका केटाहरूको सातो जान्थ्यो । कसको साहस, केही हल्ला गर्ने वा चटकलाई बीचैमा छाडेर हिँड्ने !
यस्ता कतिपय चटक नेपालमै पनि देख्न पाइन्छ । विशेष गरी भारततिरबाट आएका चटकेहरूले यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका देखिन्छन् । यदाकदा तराई भेगका दुर्लभ मानिस पनि चटक गर्दै हिँडेको देख्न पाइन्छ । तराई भेगमा, काठमाडौँमा र जिल्ला सदरमुकामहरूमा यस्ता चटक अक्सर देख्न पाइन्छ । यहाँ मात्र होइन, बरू पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान आदिमा पनि यस्ता चटक भइरहने गर्छन् ।
त्यसो त मैले अमेरिकाका केही अरू ठाउँमा पनि यस्ता मिल्दाजुल्दा चटक देखेको थिएँ । मेरिल्यान्डको बाल्टिमोर हार्बर घुम्दा तीन–चार जनाको समूह देखेको थिएँ । उनीहरूमध्ये एक जना गिटार बजाउँदै थियो र उसका अरू साथीहरू टोपी, धागो र परेवासहितको चटक देखाउँदै थिए । आफूहरूले बनाएको ठूलो घेराका बीचमा उनीहरूले एउटा सानो र सफा कपडा बिछ्याएका थिए । त्यहाँ घुम्न आएका मानिसहरू एकछिन उभिन्थे, उनीहरूको चटक हेर्थे, अलिअलि हाँस्ने/मुस्कुराउने गर्थे र एक वा पाँच डलरको नोट त्यो कपडामा राखिदिएर अन्यत्र लाग्थे ।
नेपालमा बेलाबखत चटक हेरेको सम्झिँदा सात समुद्रपारि अमेरिकामा रहँदा पनि यस्तो जिज्ञासा मनमा उम्रिरहन्थ्यो– यहाँ कस्तो होला ? के यहाँ पनि हामीकहाँ जस्तै चटक हुने र देखाइने गरिन्छ होला ? के यहाँको व्यस्त समाजका मानिसलाई घन्टौँ एकै ठाउँ उभिएर कुनै चटक हेरिरहने फुर्सद हुन्छ होला ? के यहाँ पनि बाँदर–भालु नचाउनेहरू हुन्छन् होला ? अथवा, कुन किसिमका चटकहरू यहाँ हुन्छन् या हुन्नन् होला ? यस्ता र अरूअरू सोचाइ बेलाबेला मनमा आइरहन्थे ।
अलेक्जान्ड्रियाको त्यो सर्पदंश प्रसंगले मेरा धेरै जिज्ञासाको जवाफ दिएर गयो ।
[अनुभूति] म कोदे
अनुभूति: जिरो पर्सन्यालिटी